aung myo khaing's Likes - Myanmar Network
aung myo khaing's Likes
Back to aung myo khaing's Page
The Key to Excellent English Speaking အရေးအကြီးဆုံးသော English ကျွမ်းကျင်မှုက ဘာပါလဲ။ ပြေပြေပြစ်ပြစ် English လို (ပြောဆို) ဆက်ဆံဖို့ ဘယ်လို ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမှာပါလဲ။ အထင်အရှားဆုံ နံပတ် ၁ တော့ fluencyပါ။ fluencyဆိုတာကေ… Discussion The Key to Excellent English Speaking 88 Likes
Easy way to speak English (3) အင်္ဂလိပ်လိုလွယ်လွယ်ပြောကြရအောင် ကဏ္ဍမှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ အလွယ်တကူသုံးလို့ရမယ့် စကားစုတွဲလုံး (phrase) တွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်. I have to + (Verb) ဖော်ပြထားတဲ့ have to (ဒါမှမဟုတ်) has to ဟ… Discussion Easy way to speak English (3) 79 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Beat… It beats me (ငါတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကွာ) You say it beats me when you cannot understand something. (It beats me (ငါတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကွာ) ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို နားမလည် တဲ့အခါမှာ… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Beat… 105 Likes